विजयपुर खोला तरेर – मझेरी डट कम
काठमाडौ, वैशाख ३० –
देउराली उकाली चढेर,
सानीलाई बेलाउँदा बोल्दिनौ,
पर्नु पीर पर्यो नि,
ज्यानलाई पर्नु पीर पर्यो ।
०२८ सालतिर रेडियो नेपालमा यो गीत रेकर्ड गर्दा सरोजगोपाल वज्राचार्य १९ वर्षको झिल्के उमेरमा थिए । रेकर्ड भएको ४० वर्षपछि पनि सरोजगोपालको परिचयको भारी बोकेर यो गीत रेडियोमा बजिरहेको छ ।
स्कुले उमेरमा तनहुँको बन्दीपुर हुँदै कास्कीको सातमुहाने देउरालीको ठाडो उकालोमा असिनपसिन भएर शैक्षिक भ्रमण गरेपछि उनलाई यो गीत फुरेको थियो । ‘त्यो बेला विजयपुर खोलामा पुल थिएन,’ भर्खर मधुमेहको उपचार गरी राजधानीबाट पोखरा फर्केका गायकले पुराना दिन सम्भिए ।
मधुमेहले उनी सिट्ठै दुब्लाएका छन् । समाचार र होहल्लाबाट टाढै बस्न रुचाउने गायकले सकिनसकी हार्मोनियम समाए ।
२०२७ सालमा एसएलसी पास गरेर पृथ्वीनारायण क्याम्पस भर्ना हुने बेला यो गीतको रचना भएको थियो । ‘क्याम्पसका संस्थापक गुरु जर्ज जोनले नयाँ विद्यार्थी परिचय कार्यक्रमका लागि गीत गाउ भनेपछि मैले यो गीत बनाएको थिएँ,’ कार्यक्रममा गीत हिट भयो । र, सरोजगोपालको गायक बन्ने बाटो खुल्यो ।
त्यसपछि काठमाडौंको नाचघरमा गण्डकी अञ्चलस्तरीय गीत प्रतिस्पर्धाहरूमा गीत गाउन उनी काठमाडौं हानिन थाले । त्यसैताका अमृत साइन्स क्याम्पसको होस्टलमा ‘विजयपुर खोला’ उनले दोस्रोपटक गाए । जहाँ सुनाए पनि गीतले प्रशंसा पायो । ‘तर, रेकर्ड गर्ने हिम्मत थिएन, बिग्रिन्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो,’ उनले भने, चेतन कार्कीसँग भेट भएपछि भने गीतले आफ्नो बाटो समात्यो । ‘उहाँले नातीकाजीलाई भनेर रेकर्डको टाइम मिलाइदिनुभयो, अनि बल्ल रेकर्ड भयो ।’
गीत रेकर्ड भएर बज्न थालेपछि सरोजगोपाल एक समय निकै फ्रस्टेड भए । कारण ? ‘जम्मा दुईपटक बजेपछि मेरो गीतलाई प्रतिबन्ध लगाइयो,’ उनले भने । किन त ? ‘गीतमा भएको शब्द ‘अब त सानी तरुनी भई, जीउमा रंग चढेछ’ ले छाडापन फैलाएको भनेर पञ्चायतका आसेपासेले बन्द गरिदिए,’ उनले आफ्ना दु:ख सुनाए ।
०२८ मा वीरेन्द्र राजा भए । त्यसैताका पुलिस क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो प्रतिबन्धित गीत सुनाए । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खड्कजित बरालले गीत मन पराए । तैपनि प्रतिबन्धचाहिँ खुलेन । यसका लागि वीरेन्द्रको पोखरा भ्रमण नै कुर्नुपर्यो ।
‘वीरेन्द्रको पोखरा भ्रमणमा रत्नमन्दिरमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो,’ उनी स्मृतिमा फर्किए । ‘त्यसमा गायनको कार्यक्रम थिएन तर नाच्नेहरूले बीचमा पोसाक परिवर्तन गर्दा धेरै समय लागेपछि आईजीपी बरालले मलाई गीत गाउन भन्नुभयो,’ अनि, उनले आफ्नो त्यही प्रतिबन्धित गीत राजाका अगाडि गाए ।
गीत सुनाइसकेपछि वीरेन्द्रका एक अंगरक्षक आएर उनलाई सोधे, ‘अघि गीत गाउने तपाई नै होइन ?’ प्रश्नले गायक झस्किए । ‘सरकारले फेरि गाउन मर्जी भएको छ,’ अंगरक्षकले भने । ‘यो सुनेपछि म दंग परें, फेवातालको चिसो हावाको छेउमा पनि मलाई खलखल पसिना आइरहेको थियो,’ उनी सुनाउँदै गए, ‘राजाले के भन्ने हुन् भन्ने डर लागिरह्यो ।’ दुईपटक गीत सुनिसकेपछि वीरेन्द्र उनको नजिक आएर भने, ‘पर्नु पीर पर्यो, यो गीत साह्रै मन पर्यो ।’ उनले नगद पुरस्कार पनि पाए । र, राजाले फर्माइस गरेको गीत भनेपछि रेडियोको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा भयो ।
‘जीवनमा पहिलोपटक लेखेको र गाएको गीतले नै मलाई चिनायो,’ हार्मोनियम सुम्सुम्याउँदै उनले भने । ‘मेरी बाल्यकालकी एउटी साथी थिइन्, उनी ठूली भएपछि बोल्न छोडिन्, मैले त्यो भावना पनि गीतमा समावेश गरेको थिएँ,’ उनले सम्भिए र भने, ‘ती अहिले भेट्दा पनि बोल्दिनन् ।’
पहिलो गीत हिट भएको एक वर्षपछि पोखरेली गायकले अर्को गीत रेकर्ड गराए, ‘नक्कलीलाई भगाई लग्यो झिल्केले’ । यो गीतले पनि बजार पिट्यो । लोकआधुनिक शैलीका उनका गीतको सिलसिलालाई त्यसपछि ‘तोरी हरियो’ले अघि बढायो । करिब दुई दर्जन गीत रेडियोमा रेकर्ड भए । ‘मोफसलको गायक धेरै चल्यो भनेझैं गरेर सबै गीत रेकर्ड गर्न दिइएन,’ यसमा उनलाई अहिले पनि दु:ख लागेको छ ।
रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र नगर विकासमा सांस्कृतिक प्रबन्धकको रूपमा लामो समय उनले काम गरे ।
पोखराको माछापुच्छ्रे एफएमको स्थापनाकालदेखि ९ वर्षसम्म स्टेसन म्यानेजरको रूपमा रहे । त्यति बेलाका उनका सहकर्मी गायक अरुण थापा, सरुभक्त र विनोद गौचनको सांगीतक माहोल बन्ने गर्थ्यो ।
आफ्नै सहयात्री गायिका बाबा राणाको साथले पनि उनलाई संगीतमा समर्पित हुन अग्रसर गराएको छ । जीवनसंगिनी राणाले गाएको ‘बिर्सी जाने निष्ठुरीलाई’ बोलको गीत उनलाई पनि औधि मनपर्छ ।
स्वास्थ्यलाभपछि आफ्ना पुराना गीतलाई रिरेकर्ड गर्ने उनको योजना छ । ‘धेरै स्रोताले नयाँ गीत चाहियो पनि भनेका छन् । अब फेरि रियाज गर्न थाल्छु,’ उनले आफैंसँग गरेको प्रतिबद्धता बताए ।
प्रकाशित मिति: २०६८ वैशाख ३१ ११:५४
1 thought on “विजयपुर खोला तरेर”
अतिथि June 15, 2011 at 1:39 pm
dear aadarniya dajee saroj gopal jyu
namaste with mitho samjhana!!!
yo aantarbarta herdaherdai ma pani pokhara bhim kali patan ma pahilo bhet bhaye ko yad le satayo. sanchai hunuhudo rahechha khusi lagyo.hami sugar ka pani gotrya bhai bhai rahechhun.ma pani sugar le pidit bhaye ko chhu.
aabata sani thuli bhayeki thiyi k garnu hami budho bhaiyo. aafnu health ko care garnu ki sani lai herirakhnu yesto bela pani hune rahechha.bhet bhaye ma pokhreli hanso hasmla ni dajee. bida hunchhu thanks with best regard